प्रेरणाका स्रोत भवानी : जो १२ वर्षदेखि ह्वील चेयरको सहायतामा रिपोर्टिङ गर्दै छन् !
"अनि शरीरको एक भागले काम गर्नै छोड्यो "
करीब ४५ वर्षअगाडि फर्कौं !
सानोमा भविष्यमा के बन्छु भन्ने सोच थियो तपाईंको रु लोकान्तरकर्मीको प्रश्नमा मुसुक्क हाँस्दै उनले भने, ‘स्कूल पढ्दा सरहरूले भविष्यमा के बन्ने रु भनेर सोध्नु हुन्थ्यो । मैले त्यहाँ एक जना व्यापारी देखेको थिएँ मलाई पनि व्यापारी बन्ने रहर जागेर आएको थियो ।
अनि शरीरको एक भागले काम गर्नै छोड्यो..
‘पहिला जस्तै खोजमूलक समाचारका लागि अहिले पनि रिर्पोटिङमा जान त सक्दिनँ तर, जानै पर्ने अवस्था आएमा बैसाखी र ह्वील चियरको सहायताले गइरहेको हुन्छु’, उनले भने, ‘सवारीको चाप हुँदा त निकै गाह्रो हुन्छ, पेसाले पत्रकार भएपछि अपाङ्ग भइसकेपछि मलाई पहिला र अहिले गर्ने व्यवहार निकै फरक हुन्छ । पहिलाका साथी आफन्तहरूले साथ छोडे, अहिले काम पर्दा मात्रै सम्झिन्छन्’, उनले दुःखेसो पोखे ।